Elu elu: ihe ọ bụ, otu o si malite na mkpa ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị na-ekwu maka ikuku mmiri, anyị ga-amata ọdịiche dị iche iche nke bụ ihe na-aka akara mmiri mmiri. Otu n'ime ihe ndị a bụ runoff. A maara ya site na aha mmiri nke oke mmiri ma ọ bụ echiche nke na-akọwa nrughari nke mmiri, mmiri ozuzo, snow ma ọ bụ mmiri ndị ọzọ na ala. Akụkụ a na-eme ka otu isi ihe dị na mmiri mmiri.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe mmiri dị elu dị, mkpa ọ dị na ebe esi nweta ya.
1 Gịnị bụ elu runoff
2 Mmalite na ọgbọ nke runoff
3 Mmiri ndị dị n'ime mmiri na-asọba na infiltration gabigara
4 Mmetụta mmadụ na-agba n’elu ala
Gịnị bụ elu runoff
Mgbe anyị na-ekwu maka oke mmiri anyị na-ekwu maka ya na ọ na-adị n'elu ma na ọ na-ewere ọnọdụ tupu ị rute ọwa dịka osimiri ma ọ bụ ọdọ. N'ime mmiri a, anyị na-ahụ mmiri dị ukwuu site na mmiri ozuzo dịka mmiri ọ bụla ọzọ si na mmiri nsị na-emerụ emerụ. Mgbe ọ na-abịa n’elu mmiri, ọ bụrụ na ọ na-ewere ọnọdụ tupu ya eruo ọwa, a na-akpọ ya isi na-enweghị isi. Ọ bụrụ na isi mmalite a na-enweghị isi nwere mmetọ ndị na-emetọ ya, a maara ya dị ka mmetọ enweghị isi.
Mpaghara dum nke na-ahụ maka ịwepụta mmiri nke mmiri a ka ọ bụrụ mmiri mmiri na ntọala nke nnukwu ego mmiri a maara dị ka mmiri mmiri. Anyị maara na ọtụtụ nsị mmadụ mere sitere na fatịlaịza kemịkal na site na nsị ndị ọzọ na-emepụta ihe na mmiri. Ya mere, ọ dị mkpa iji nyochaa ma mmiri a na-asọba n'akụkụ ala nwere ike ịnakọta ihe na-emetọ emetọ na ala. Ihe mmetọ ndị a nwere ike bụrụ mmanụ, ọgwụ ahụhụ, ahịhịa, ọgwụ ahụhụ na fatịlaịza, tinyere ndị ọzọ.
Mmalite na ọgbọ nke runoff
Dị ka anyị kwurula na mbụ, mmalite mmiri nwere ike ịmalite site na mmiri ozuzo ma ọ bụ site na-agbaze snow taa ice na glaciers. Mgbe agbaze nke glacier snow pụtara, mgbe oge agbaze ahụ na-abịa, ọ na-abụkarị naanị na ebe oyi dị. Nke a snow runoff na-ebukarị elu na oge opupu ihe ubi mgbe okpomọkụ na-ebili. Glaciers gbazee kpamkpam n'oge ọkọchị ma ha mepụta oke mmiri ka ọ na-asọ ma mmiri iyi na-emetụta ha. Mmiri a niile na - eme ka osimiri na - eto na ala mbuba na - abawanye. Ihe na-ekpebi ihe ịgbaze mmiri nke snow ma ọ bụ glaciers bụ ọnọdụ ikuku na ogologo oge nke ihe ahụ mere.
Anyị na-ekwu maka ndagwurugwu na V mgbe ha bụ ndagwurugwu glacial kemgbe a na-anakọta nnukwu mmiri na-asọba n’ime mmiri n’oge na-adịghị anya. Naanị n'oge oge nzube mmiri ka anyị hụrụ mmiri na-asọ asọ n'ime osimiri ahụ siri ike imebi ma gbanwee ala ahụ. N'aka nke ọzọ, mgbe anyị na-ekwu maka ndagwurugwu yiri U, anyị na-ekwu maka ndagwurugwu a na-ahụkarị. Ntube a bụ n'ihi eziokwu nke iyi mmiri na-asọ mgbe niile n'afọ. N'oge ndị a anyị nwekwara oge mmiri anaghị erute n'oge ọkọchị.
Ugwu ugwu dị elu nwere iyi ndị na-ebili n'ụbọchị anwụ na-acha ma na-ebelata n'ụbọchị ụbọchị igwe ojii n'ihi ntakịrị radieshon nke anyanwụ. N’ebe enweghị snow, mmiri na-esite na mmiri ozuzo. Ekwesiri ikwuputa na obughi oke mmiri ozuzo na-ewepu mmiri. A na-emepụta mmiri ozuzo mgbe ala na-enweghị ike ịchekwa nnukwu mmiri mmiri n'ihi oke mmiri ozuzo.
Dịka ọmụmaatụ, enwere oke ala ochie n'Australia na n'ebe ndịda Africa ebe mgbọrọgwụ proteoid dị. Mkpọrọgwụ a kpọrọ nkụ ma nwee ọtụtụ ntutu nke na ha nwere ike ịmị nnukwu mmiri ozuzo. N'ihi ya, O siri ike ịnweta mmiri iyi n'ihi na ha nwere ike ịmị ọtụtụ mmiri ozuzo. Tụkwasị na nke a, ọ ga-enwerịrị ike dị ala maka evaporation maka oke mmiri ka ọ dịruo ogologo oge.
Mmiri ndị dị n'ime mmiri na-asọba na infiltration gabigara
Otu ihe dị mkpa iji tụlee n'ime elu mmiri bụ usoro ntinye. Ọ bụ usoro mmiri na-abanye n'akụkụ ala nke ụwa. N'ebe a, a na-echekwa mmiri ahụ na aquifers ma na-eje ozi dị ka mmiri mmiri. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ efere ọ bụla dị obere ụlọ ahịa mmiri. Nke a infiltration etịbe obere ugboro ugboro na efekarị na ọkara efekarị na mpaghara ebe nke ike nke ọdịda dị elu na infiltration ọnụego ala n'ihi mgbochi mmiri nke elu.
Enwekwara oke mmiri dị elu na ọnụọgụ infiltration dị ala ala. Akụkụ ọzọ bụ oke mmiri jupụtara na mmiri. Nke a bụ ọnọdụ na - eme nke mere na oke mmiri na - erute. N'okwu a, ala ahụ jupụtara na mmiri ma basin ahụ echekwala dị ka o kwere mee. N'okwu ndị a, oke mmiri ga-apụta n'ihi oke mmiri ozuzo. Uzo nke mmiri dị na ala bụkwa ihe na-emetụta ogologo oge ọ ga-ewe ka ala wee jupụta. Ka mmiri dị na mmiri, ngwa ngwa ọ ga-ejupụta na mmiri. N'ihi ya, ịnwere ike ịchekwa obere mmiri ma mechaa mepụta mmiri dị elu.
Mmetụta mmadụ na-agba n’elu ala
Okwesiri iburu n'uche na ndi mmadu na-emetụta oke onu ogugu ndi di ugbu a. Ma ọ bụ na anyị na-ekepụta ihe ndị na-enweghị mmiri dịka ụlọ na ụlọ. Ihe mgbochi mmiri a pụtara na mmiri enweghị ike ịbanye n'ime aquifer. Kama mmiri na-adanye n'ime ala, a na-amanye mmiri ahụ kpọmkwem n'ime iyi ma ọ bụ drainage ebe oke mbuze na nsị dị. Ọnọdụ ndị a bụ ihe na-ebute idei mmiri n'obodo.
Surfacegbapụ mmiri n’elu na-ebelata ịnapụta mmiri mmiri ma na-agbadata mmiri dị na mmiri. Ndị a bụ ọnọdụ ha na-eme ka ọkọchị ka njọ karịsịa maka ubi ọrụ ugbo na ndị ahụ niile dabere na olulu mmiri. Tụkwasị na nke a, n'ọnọdụ a, a ghaghị itinye ọnụnọ nke ihe mmetọ anthropogenicụl na-agbaze n'elu mmiri na-emetụta ahụ ike ndị mmadụ. Ngwunye nke mmetọ a nwere ike iru mmiri na osimiri, ọdọ mmiri na n'oké osimiri wee merụọ mmiri.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oke mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Gịnị bụ runoff